बुवाको टोपी र मेरो रोइलो « Himal Post | Online News Revolution
बुवाको टोपी र मेरो रोइलो
प्रकाशित मिति : २०७३, १८ पुष ०९:४३
होईनन । हाम्रा बाहरूले गरेका हुन । तर बाहरुले न ‘ई लगाइम’ भनेर देखाउँछन,न संस्कृति जोगाइम भनेर कराउँछन । चुपचाप लगाउँछन । त्यसैले त बा हरुका शिरमा टोपी खुब सुहाउँछन पनि । सुहाउने भएर त अझै पनि हाम्रा फुपु हरुले भाइटिकामा बा को लागि टोपी नै उपहार ल्याउँछन । के हाम्रा बहिनी हरूले भाइटिकामा टोपी उपहार ल्याउँछन ? ल्याउन छोड़े । बहिनी हरुले बुझेका छन्, दाइ हरुको पुस्ता शिक्षित-आड़म्बरी छ,बौद्धिक-ढोँगी छ । त्यसैले आफ्ना माइतिको आड़म्बर छताछुल्ल हुन नदिन बहिनी हरुले टोपी उपहार ल्याउँदैनन अचेल । बहिनीहरू लाई राम्ररी थाहा छ,दाइ हरुले संस्कृति र परम्परा लाई आधुनिकता सँग यसरी मुछेका छन् कि उनीहरू मौका मिल्ना साथ टोपी धारण गरी सञ्जालमा उपस्थित भइदिन्छन र राष्ट्रियता प्रदर्शन गर्छन् अनि अर्को मौका मिल्ना साथ टोपीको स्वभिमानलाई दलालीको बजारमा सट्टाभर्ना गर्छन्,टोपी टेबलमा राखेर रेड लेभलमा राष्ट्रियताको सौदावाजी गर्छन् । बहिनी हरुले बुझेका छन्,शिक्षित ढोँगी दाइ हरू सँग अशिक्षित बा हरुका भन्दा तगड़ा तर्क छन्,जो ‘इस् के टोपी उसके सर’ गराउन माहिर छन् । त्यसैले पनि बहिनी हरू अचेल टोपीको सट्टा परफ़्यूम उपहार लिएर भाइटिका लगाउन आउँछन । ‘परफ़्यूम-पुस्ता’ले टोपीको मान राख्न सक्दैन भन्ने बहिनी हरुले बुझेका छन् ।
हाम्रो मौलिक टोपी दिवस त भाइटिकाको दिनमा पर्छ ।टोपी लगाउने बाको पुस्तालाई सलाम , टोपी देखाउने हाम्रो पुस्तालाई म के भनम ?
तपाई पनि आफ्ना लेख ,रचना ,बिचार आदि प्रकाशन गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected]मा पठाउनुहोला ।